सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न छलफल सुरु, नेपालले उठायो कुरा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएका पुराना सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित दुई देशबीचको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को बैठक बिहीबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदै छ । ईपीजीको छैटौं बैठकमा सहभागी हुन नेपाली समूह नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । नेपाली समूहका सदस्यमा भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय, निलाम्बर आचार्य र डा. राजन भट्टराई छन् ।
हालसम्म भएका बैठकमा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् १९५० को पुनरावलोकनको विषयमा छलफल चल्दै आएको छ। गत वर्ष असारमा भएको पहिलो बैठकदेखि नै दुई देशबीच भएका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि छलफल चलिरहेको छ ।
समूहमा भारतका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, प्रा. बीसी उप्रेती र पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद छन् । अाजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।
प्रदेशको आवधिक योजना बनाउन अस्ट्रेलियाली लगानी, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समेत बेखबर
काठमाडौं । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको आवधिक योजना बनाउन अस्ट्रेलियाली लगानी […]
२ दिन देखी सबै मिडियाहरु सामाजिक सुरक्षामय, के हो सामाजिक सुरक्षा योजना ?
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका कामदारलाई सरकारीभन्दा बढी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन योगदानमा आधारित सामाजिक […]
द्रुतमार्ग रेखांकन गरिएको भागमै पुरातात्त्विक सम्पदा !!
काठमाडौँ । निर्माणधिन काठमाडौँ–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विषयलाई लिएर चर्को विरोधमा उत्रिरहेको […]